Qaraarka 4k cayn kasta oo warbaahinta u dhawatay la ruxruxo ee mustaqbalka. Iyada oo xalka 4k, waxaad la kulmi karaan tayo ka badan aad waligaa kuwaad markii daawashada TV muujinaya, filimada, ama videos. 4k ayaa la heli karo ka soo tebiyaan ka badan TV-ga iyo shineemada, oo ay ku jiraan YouTube Blu-ray iyo.
Hadda oo aad ogtahay 4k waa habka ay u tagaan, su'aashu waxay tahay, waxa aad daawan doontaa? Lucky idiin, waxaa jira tan oo ka kooban 4k oo uu soo daawaday tobanaan kun oo daawadayaasha. In ka badan tahay, oo dhan ka kooban warbaahinta (filimada, bandhigyada TV, videos, iwm) si toos ah ayaa la heli karaa in 4k, halkii HD [Qeexid High] (kaas oo ficil horay loo qaaday ka badan SD [Standard Qeexid]) doonaa.
Hoos waxaa ku qoran, waxaad ku baran doontaa sida loo daawado 4k content-Iyamaa hawl yar ka badan waxaad u malaynaysaa-iyo laga yaabaa arki Siiyay Goolhaye Iker Casillas ugu wanaagsan loogu 4k content in aad heli karto si aad hadda. Sababtoo ah 4k Eebehay aad waayo-aragnimo la daawado, daawashada saxaafadda in aad u jecel muhiim u tahay loogama riyaaqayaa xal HD Ultra. Haddii aadan aqoon aad meel aan ka bilaabo, ha ka welwelin. Ka dhig wax akhriska ka hooseeya in ay bartaan sida ay u daawadaan muujinaya 4k telefishinka, filimada, iyo videos saddex siyaabood oo gaar ah.
Sida loo Daawo 4k Content
Bilaha soo socda, content iyo aad u badan 4k ayaa qorsheynaya in lagu sii daayo Netflix. Sababtoo ah Times ah in Netflix waa si aan qaali ahayn oo caan ah, laga yaabo kun ku kor kun oo qof ayaa ka faa'iideysan doona kala duwan ee ka kooban 4k.
Nasiib darro, 4k Netflix ayaa la dhaafi karin qaar ka mid ah. First off, aad telefishinka waa mid lagu taageerayo HEVC, ama H.265, riixo. Your TV 4k sidoo kale waa in ay noqdaan HDCP 2.2 waafaqsaneyn via ah HDMI 2.0 xiriir. Haddii aad telefishan waa aan waafaqsaneyn, saarayaasha ay u badan tahay in lagu xalliyo arrinta in mustaqbalka la updates software.
Haddii aad hab sameeyo ee la soo dhaafay, kuwaas oo la dhaafi karin, daawashada content 4k waa neecaw. Si fudud u helaan tusmada (haddii la heli karo weli) sida aad wax show kale oo aad content waa in si toos ah loo soo bandhigo lahaa in xal 4k.
Sidii hore u soo sheegnay, YouTube videos, jidkooday galay xallinta 4k. Waxaad daawan kartaa jecel aad online videos on website-kan oo isu. Halkan qabsado oo kaliya waa in aad u baahan tahay qalabka saxda ah iyo browser si ay u daawadaan videos kuwan. Hardware ayaa waxaa ka mid ah daah 4k halka browser waa in ay Google Chrome ama browser mid kale oo la jaan qaada codec VP9.
All inaad samayso si aad u daawato 4k videos on YouTube waa guji icon marsho ee kooxda gacanta midigta hoose ee video ah oo la beddelo oo tayo leh si ay u 4K. Haddii ikhtiyaar u 4K aan la heli karin, markaas nasiib aadan haysan hardware ah, browser midig, ama video ah si fudud ku iman 4k xal.
Amazon Ra'iisul Instant Video 4k
Haddii aad hore u leedahay xubin ka Amazon Ra'iisul ah, adeegyada 4k aad heli karto lacag la'aan. Ra'iisul waa il weyn ee warbaahinta daawadayaasha, sidaas helitaanka 4k on boosteejo tani waa raaxadeeda weyn. Shirkadda xitaa ay soo taxane asalka u gaar ah, la heli karo dad badan oo 4k, kaas oo la soo xulay karaa waanan fiiriyey bogga internetka ee Ra'iisul ama app.
Si aad u aragto content Ra'iisul ee waa in aad, dabcan, daawo qalab 4k socon. Si fudud u helaan filimada ama TV muujinaysaa aad rabtid in aad u aragto iyo Ra'iisul si toos ah loogu badalo doonaa video ay u 4k aad daawashada ahaanshaha. Haddii aadan xubin ka mid ah Ra'iisul laakiin weli aad u jeclaan lahaa in qayb ka mid ah tallaabada ahaan, mar walba waxaad weli ka iibsan kartaa warbaahinta iyada oo Amazon.
Content 4k Top 2015
Xilli cusub ee riwaayadaha waa haatan diyaar u ah in aad la kulanto xalinta 4k. Taxane wuxuu ku siinayaa dhagaystayaasha eegno cusub ee dunida ka mid ah dowladda Mareykanka. Its helitaanka 4k on Netflix waa gunno weyn kuwa xiiso bilaabo taxanaha ah ama sii socda si ay u soo daawadaan.
Star Wars Qaybta VII: Force ayaa kicinaysaa - Official® teaser Trailer # 2 (Ultra HD - 4K)
Waa filim ah in qof kasto la sugayo. The Qaybta asalka Star Wars VII trailer ayaa la ciyaaray malaayiin jeer. Hadda, aad ku raaxaysan karaan taasi "imanaya-dhakhsaha badan" movie hab cusub oo ay arkaysid cusub 4k xal trailer. Muuqaalada in video waxaa cajiib ah wada muraaradilaac si ay u abuuraan la filaayo in la sii daayo Star Wars Qaybta VII in tiyaatarada ee December.
Amazon Ra'iisul Instant Video
Aad jaceshahay Amazon Taxanaha Original waxaa soo laabanayo qaab ay xilli ciyaareedkii ugu dambeeyey 3. Season 4 sidoo kale waa in Samaynta, isku diyaarineysa inay la sii daayo waqti ka mid ah sanadka 2016 Ilaa iyo markaas, waxaad ku raaxaysan karaan xilli dambeeyay Orphan Black ee xal cajiib 4k, qabsaday kasta faahfaahsan oo ah sheekooyin sayniska ee.
A Aad u Murray Christmas
Comedy Tani asalka laga heli doonaa dhawr bilood gaaban xal cajiib ah 4k. Movie wuxuu caawiyaa si ay u muujiyaan kala duwan marka ay timaado 4k content, ka shuqullada aad u xun tahay in a comedy-riwaayadaha in iftiiminaya niyadda lagu jiro xilli Christmas. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad ku raaxaysato filimkan soo socda ee 4k waa xubin la awoodi karo Netflix.
New York ee 4K
Ever ku riyoon jiray booqanaya gobolka boqortooyadii? Iyada oo xalka 4k cajiib this video ayaa, waxa uu dareensan yahay sida aad sax tahay qalbiga New York, iyada oo aan tago aad computer ama qalab screen! In video ah, waxa aad awoodi kartaa in ay baadhaan dhinacyada dabiiciga ah ee ku nool New York, iyo xallinta 4k waa waa in ay leedahay si ay u xoojin waayo-aragnimo ah.
> Resource > Video > Top 4k Content Guide Waxaad u